'म बलात्कृत होइन, बरु चरित्र हत्या गरेर पीडित बनाईयो' : मिमसरा महतारा - Pariwartan Khabar Pariwartan Khabar
‘म बलात्कृत होइन, बरु चरित्र हत्या गरेर पीडित बनाईयो’ : मिमसरा महतारा
31 August, 2021 10:45 am
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री द्वारा बलात्कृत भनिएकी महिलाले आफु बलात्कृत नभएको बताएकि छन्।
म पीडित भएको मलाई नै थाहा छैन । विना कारण मलाई आज नखाएको विष लागेको छ । न म अन्याय छु नत म बलात्कृत महिला हो । रुदै भनिन् ।
ममाथिको बलात्कारको विषय थियो भने मलाई किन सोधिएन र एक कल फोन किन गरिएन ? अनुमति विना अर्काको समाचार लेख्न पाईन्छ र ? मेरो फेक भिडियो बनाएर मेरो चरित्र हत्या गरिएको छ, पत्रकार र सामाजिक सञ्जालले जबरजस्ती बलात्कृत बनाउँदै छन् ।”
हामी बुढाबुढी सुर्खेत कोठामै रहँदा रहँदै हामीलाई थाहा नदिई अन्याय परेको बनाएर आईतबार युवा संघ, अनेरास्ववियुका विद्यार्थीले गरेको आन्दोलनप्रति आपत्ति जनाउँदै आफ्नो ईज्जतलाई साधन बनाएर राजनीति स्वार्थ पुरा गर्न खोजिएको उनले आरोप लगाईन् ।
यही कारणले आफ्नो जीवन केही भए त्यसमा स्वयं मिडिया र नारा जुलुसको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति जवाफदेही हुनुपर्ने उनले चेतावनी दिईन ।
उनका पति आयुष सेजुवालले आफ्नो श्रीमतीलाई गोटी बनाएर केही पार्टीका नेताले रिस साँध्न र राजनीतिक लाभ लिन खोजिएको आरोप लगाए ।
सेजुवमलले मन्त्री र आफ्नो श्रीमतीबीच बाबु छोरीको सम्बन्ध रहेको बताए ।